Posted by: chhepyastra weekly | सेप्टेम्बर 19, 2010
भारत नेपालले गरेको प्रगति हेर्न चाहदैन
अमिक शेरचन, स्थायी समिति सदस्य- एकीकृत नेकपा माअेlवादी
०	सात-सात पटकको नविर्ाचनबाट पनि मुलुकले प्रधानमन्त्री पाउन सकेन, अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
नेपाललाई स्वाधीन राष्ट्र बनाउने हो, विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउने हो, समृद्धशाली नेपाल बनाउने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यसलाइृ कार्यान्वयन गर्न सहमतिको विकल्प छेन । नेपाल दुइृतिर रहेका ठूला राष्ट्रहरुबीचको भूमपरिवेष्ठित मुलुक हो । यस्तो अवस्थामा हामीले नेपाललाई हेर्ने दृेष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । भारतसाग हाम्रो तीनतिरको खुला सीमानजा रहेको छ ।भ ारतीय अतिक्रमण प्रत्येक दिन बढ्दो छ । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा प्रभाव पार्ने भारतीय पक्ष नै हो । त्यसकारण नेपालको अथतन्त्रलाई बलियो नबनाई नेपालीको आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । आर्थिक समृद्धि हुनुको लागि दलहरुबीच सहमतिको विकल्प छैन । मुलुकको सम्पूर्ण समस्याको मसाधान सहमतिको आधारमा निकाल्नुपर्छ ।
०	भनेपछि, तपाई.हरु सहमतिको लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी फिर्ता लिन तयार हुनुहुन्छ
देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइराख्नु हुादैन । त्यसको लागि दुवै उम्कमेदवारले उम्मेदवारी फिर्ता लिएर जुन व्ग्यक्तिको नाममा सहमति हुन्छ, त्यसरी नै अगाडि बढौा भनेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष प्रचण्डले यसतो प्रसताव रामचन्द्र पौडेलसाग राख्नुभयो । तर, नेपाली कााग्रेसले उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहेन । त्यसमा पनि विशेषगरी रामचन्द्र पौडेलले मान्नुभएन । त्यसकारण सहमतिबिना उम्मेदवारी फिताृ लिनुको कुनै औचित्य होलाजस्तो मलाई लाग्दैन ।
०	माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राजीनामा दिएको अढाई महिना बितिसक्यो, काम चलाउको हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले विभिन्न वैधानिक कामकारवाही थालेको छ, उसको सक्रियता हेर्दा कतै यही काम चलाउ सरकारले निरन्तरता पाउने त होइन ?
विधिको शासनको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दलहरुे गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ, राजीनामा दिसकेको सरकारले वैधानिकता पाइरहन्छ भन्ने विधि कहीा, कतै छ कि छैन ? यतिबेला विधिको शासन भनेर चिच्याउने दलहरुले सोच्नैपर्दछ । विधिको शासनको कुरा पनि गर्ने अनि काम चलाउको हैसियतमा रहेको सरका।रले हरेक कुरालाई वैधानिकताको खोजी गर्न कोसिस गर्ने जुन प्रयास भइरहेको छ, यो आफेामा अन्तरविरोधी कुरा हो ।हामीले पहिल्यैदेखि नै पुराना विचारहरु थोत्री सकेको भन्दै आएका थियौा, त्यो अहिले आएर पुष्टि भएको छ । संसदय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यतालाई धज्जी उडाउादै वर्तमान काम चलाउ सरकारले आˆनो कामकारवाही अगाडि बढाइरहेको छ । यसो गर्नु भनेको संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउनु हो । अहिले संसद्मा अर्थ विधयक प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाने जुन कुराहरु बाहिर आएका छन्, त्यस’bout यो काम चलाउ सरकारले कुनै निर्णय गर्न मिल्दैन । राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालजस्तो गरिब राष्ट्रबाट भाग लिन जाने भनेको तीनजना मात्र हो । राष्ट्रसंघले हामभ्रो् देश गरिब भनेर तीनजनाको लागि कोटा राखेको छ । यस कोटाको लागि लाग्ने सम्पूर्ण खर्च राष्ट्रस.घले बेहोर्छ । हामीले राष्ट्रस.घको महासभासमा भाग लिन तीनजनाभन्दा बढी पठाउनुहुन्न । त्यसमा दुईजना नेपाल सरकारका कर्मचारी र एकजना संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै एकजनाको संसदीय दलको नेतालाई पठाइदिए हुन्छ । संसद्को स्वीकृतिबिना कुनै पनि आर्थिक विधयक संसद्मा प्रस्तुत हुादैन । अर्थविधयक अहिल्यैकै तरिकाले पास गर्ने हो भने मन्त्रिपरिषन् अति निरङ्कुश हुन्छ । त्यसमा पनि अर्थमन्त्री त महानिरङ्कुश नै बन्न सक्छन् तर विधयक संसद्मा प्रवेश नगरी संसारमा कहीा पनि अगाडि बढ्दैन । यसरी विधयक ल्याउादा मन्त्रीहरुले पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।
०	सरकारको कार्यशैली हेर्दा तपाईंहरु अहिले चलिरहेको संसदीय व्यवस्था असफल भयोभ न्दै हुनुहुन्छ । अब तपाईंहरुले यी सबै प्रक्रिया तोडेर नयाा मोडतर्फ जाने’bout सोचिरहनुभएको त छैन ?
हिजो राजतन्त्र थियो, अहिले गणतन्त्र छ । गणतन्त्र भनेको हिजोको तुलनामा नयाा नै हो । गणतन्त्रभित्र पनि नेपाल जिनताले. अग्रगामी छलाङ चाहेका छन् । अग्रगामी छलाङ नगरी नेपल स्वाधीन राष्ट्र बन्दैन भन्ने कुरा नेपाली नजताको मनमनमा छ । मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने दिशामा मुलुक स्वभाविक रुपमा अगाडि जान्छ । कसैले छेकेर यो प्रक्रिया छेकिन्न । मुलुकमा असमानता ज्यादै बढेको छ । राष्ट्रिय सहमतिकोअ ाधारमा आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न सक्यौा भने मात्र मुलुकमा राजनीतिक स्तिथरता हुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना राजनीतिक स्थिरता समभव छैन । जहाा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, त्त्यहाा विदेशी चलखेल ज्यादा हुने गर्दछ । जब विदेशी चलखेल बढ्छ, तब राष्ट्रिय स्वाधीनता गुम्छ, यस्तो कुरा नबुझ्ने केही राजनीतिक दलका नेतादेखि मलाई दुःख लाग्छ ।
०	तपाईंले सहमतिबाट अगाडि बढ् मुलुकले निकास पाउाछ भन्नु भो तर तपाईंकै पार्टीभित्र सहमति गर्ने या नगर्नेबीच चर्को विवाद सिर्जना भएको छ भनिन्छ नि ?
हाम्रो पार्टीभित्र जहिले पनि यथास्थितिमा रहेर मुलुकले अग्रगामी प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतामा सबैको एकमत छ । यथास्थितिमा मुलुकलाई अढाइराख्ने कोसिस गर्नुभनेको प्रकृतिको नियमको विरुद्धको कुरा हो । प्रकृति कहिल्यै पनि यथास्थितिमा रहादैन । प्रकृति गतिवान् छ, परिवतंवनशील छ । सामाजिक, राजनीतिक विकास हरेक तवरले गतिवान् हुन्छ । सामाजिक र राजनीतिक गतिसागै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पार्टीभित्र उकमत छ । नेपाल जिनताका हजारौा हजार छोराछोरीको बलिदानीबाट प्ाप्त संविधान निर्माणको यो अवसरलाई सुनिश्चित गर्न अग्रगामी संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुराचमा पनि हाम्ो पाटीृभित्र कुनै विमति छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको गयारेन्टी, लैङ्गकि भेदको अन्त्य, अल्पसंख्यक र बहुसंख्यकबीचको अन्तरविरोधद्दको अन्त्य, क्षेत्रीय असमानताको अन्त्य, वैदेशिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुने खालको नयाा संविधान निर्माण गर्न नेपाली जनताले पाउनुपर्दछ । राज्यले अब बन्ने नयाा संविधानमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई मान्य हुने खालको संविधान बन्ने हो भने मुलुक सहमतिकोअ ाधारमा अगाडि बढ्छ । सामाजिक, आर्थिकरुपमा समानता दिने अधिकार संविधानले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसतो खालको संविधान बन्ने वातावरण बन्यो भने हामी सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ र नेपालमा स्थायी शान्ति कायम गर्नुपर्छ । यदि सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक रुपन्तरण हुनेखालको संविधान बनेन भने नयाा ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ । म यस पत्रिकधामाफृत् भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म संविधानसभाको बैठक बसेकै छैन । अहिले सरकारले राजीनामा दिएको अवस्था छ । अहिले व्यवस्थापिका संसद्को बैठक कसलाई प्धानमन्त्री बनाउनेभ न्ने विषयमा मात्र बसिरहेको छ । राष्ट्र र जनताको सरकारको विषयमा छलफल गर्नको लागि संविधानसभाको बैठक बसेको छैन । अग्रगामी संविधान बन्न नदिन विशेषगरी भारतीय विस्तारवादको नाङ्गो हस्तक्षेप छ । ऊ नेपालमा संविधान बन्न नदिने पक्षमा छ । नेपालमा संविधान बन्यो भने स्थायित्व हुन्छ, जसले गर्दा नेपाल विकसित हुन्छ । भारत नेपालको प्रगति गरेको हेर्नै चाहादैन । यहााका राजनीतिक दल पनि भारतको पछि लाग्छन् भने नेपाललाई सधैा परनिर्भरताको रुपमा रहिरहने दिन कुनै पन हिालतमा हाम्रो पार्टी तयार छैन । त्यस्तो स्थितिमा कुनै पनि परिस्थितिमा जानुको विकल्प रहन्न । त्यो विकल्प भनेको नेपाली जनताले गाउागाउा, बस्तीबसतीबाट गर्ने नयढाा ढङ्गको जनआन्देालन नै हो ।
०	अनमिनको मयान अन्तिम पटकको लागि चार महिना थप भएको छ, यो चार महिनाभित्र तपाई.हरुले सेना समायोजनको विषय टुङ्गयाउन सक्नुहुन्छ ?
सेना समायोजन धेरै पहिला गर्दा पनि हुन्थ्यो, पहिला समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा अब प्याकेजमा सेना समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । अब बन्ने नयाा संविधानले कस्तो खालको सैनिक संरचनाको परिकल्पना गर्छ, त्यो आधारमा सेना समायेजन गर्नुपर्छ । अहिले सेना, समायोजन गर्ने पछि अर्कै खालको सैनिक संरचना संविधानमा लेखियो भने समायोजनको कुनै अर्थ रहन्न । त्यसकारण संविधानको घोषणा र सेना समायोजन एकैचोटि गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चार महिना होइन, त्यसभन्दा अगाडि नै पनि सेना समायोजन गर्न सकिन्छ ।
०	पूर्व राजाले अहिल्यै आˆनो क्रियाशीलता बढाइरहेका छन्, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पूर्वराजाको हैसियतले पुनः राजतन्त्र र्फकन्छ भनेर कल्पना गर्नु नेपालको कालिगण्डकी, नारायण, कोशी,म हाकाली, कणर्ाली भारतको बनारसमा पुगेर फेरि सगरमाथामा आइपुगछ भन्ने कल्पना जसतै हो । यस्तो कल्पना कहिल्यै पूरा हुादैन ।
०	चिनिया व्यक्ति र कृष्णबहादुर महराबीच भएको भनिएको टेलिफोन कुराकानीको सत्यता के हो बताइदिनुस् न ?
अहिले टेप प्रकरण भन्ने भाषा जुन प्रयोग भइरहेको योसाग म असहमत छु । त्यो टेप कहाा छ त्यो सार्वजनिक हुनुपर्‍यो । त्यो टेप कहाा छ, कहाा कसेले प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि टेप प्रकरण भनिदिने ? जे आवाज भारतपको दिल्लीबाट प्रसारण हने नेपाली भाषाको टेलिभिजन नेपाल वान्ले प्रसारण गर्‍यो, त्यो कुरा प्रमाणित हुनुपर्‍यो विभिन्न समयमा बोलिएका आवाज मिलाएर प्रविधिको प्रयोगमार्फएत् जस्तो पनि बनाउन सकिन्छ । विज्ञान र प्रविधिको विकासले गर्दा जोकसैको चरित्र हत्या गर्न सहज भएको छ । यो भनेको प्रविधिको नकारात्मक प्रयोग हो ।मैले अस्ति भर्खरै एउटा इन्टरनेटमा झलनाथजीको बरोमा बनाइएको नकारात्मक कार्टुन हरेको थिएा । यसउरी प्रविधिको प्रयोग गरेर जे पनि बनाउन सकिन्छ । महराजी र चिनियाा व्यत्ति@mबीच भएको भनिएको कथित टेप प्रकरणमा कुनै स.्त्यता छैन । यो प्रविधिको दुरुपयोग हो । पार्टीभित्र चिनियाासाग पैसा माग्ने विषयमा कहीा कतै छलफल भएकै छैन । त्यो हाम्रो पार्टीको नीति, सिद्धान्तको खिलाफमा छ । हामी विज्ञान माक्र्सवादमा विश्वास गर्ने पार्टी हौा । मैले कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएको एकान्न वर्ष लागिसक्यो । म यसबीचमा उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएा । म जनतालाई विश्वास गर्छु । मैले कुनै व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि सुरक्षा टोली माग गरिन, सरकारले दिएको पनि फर्काइदिएा । उच्च खालको नैतिकता स्थापित गर्ने उद्देश्यले कम्युनिस्ट पार्टी जन्मेको हो । हामीले विदेशीसाग सरकार गठनको लागि पैसा माग्ने कुराको त कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौा । यसअघि फोरमलाई फुटाउन करोडौा पैसा कताबाट आयो । त्यो बेला किन टेप प्रकरण भएन । गरेको भए हामी पनि आवाज जोड्न सक्थ्यौा नि । हाम्रो नैतिकताले त्यसो गर्न दिदैन । त्यसकारण महरा र चिनिया अधिकारबिचि भउको भनिएको कथित टेोन वार्ता प्रविधिको दुरुपयोग गरेर बनाइएको हो । यसमा कुनै सत्यता छैन ।
०	तपाईंको पार्टीको एकजना सभासद्लाई हालै सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ नि यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
यो ठूलो षड्यन्त्र हो । शान्तिसम्झौताको उल्लंघन हुने गरी यो निर्णय गरिएको छ । शान्तिसम्झौता गदाृ हामलिे त्यसभन्दा अघिका सम्पूर्ण मुद्दाहरु फिर्ता गर्ने सहमति गरेका छौा । शान्तिसम्झोताअघिका कुनै पनि मुद्दामा रहेर कसैलाई पनि सजाय दिन नमिल्ने सहमति विस्तृत शान्तिसम्झौता गर्दा स्पष्टरुस्पमा उल्लेख गरिउको छ । यो अनैतिक काम सरकारबाट भउको छ । सरकारले ये मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
०	यही विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिसाग अनुरोध गरेर मुद्दा फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने कुरा चलिरहेको छ, यसोभ यो भने त राष्ट्रपति सक्रिय हुादैन र ?
हाम्रो पार्टीभित्र यस विषयमा कुनै छलफल चलेको छैन । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा फिर्ता लिने कुनै अधिकार नै छैन । मुद्दा फिर्ता लिने काम सरकारले गर्ने हो । राष्ट्रपति त सेरेमोनियल हुन् । राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् । यदि उनले कायकारी भूमिका देखाए भनेर दुरुपयोग गरेको हुन्छ । राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार खोज्यो भने उनी अनैतिक ठहर्छन् ।
०	माओवादी पार्टीबाट तपाईंलाई प्धानमन्त्री दिनुपर्छ भन्ने प्रचारमा आएको थियो नि, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको लागि पहिलो प्रयत्न पार्टीअध्यक्षकै लागि हुन्छ । अध्यक्षले विकल्पको लागि आग्रह गरेपछि अन्यको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अयिहले हामी त्यस दिशातर्फ गइसकेका छैनौा ।
यस क्षेप्यास्त्र पत्रिकाले मुलुकमा गतिविधि र भएका कुरीतिलाई हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकोस् । त्यसको लागि क्षेप्यास्त्र जस्ते अगाडि बढ्न जरुरी छ । मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता यतिबेला गम्भरि खतरामा परेको छ । भारतीय विस्तारवादले तीनै दिशाबाट हाम्रो भूमिका अनितक्रमण गरेको छ । भारतले हाम्रो भूमिका गरेको अतिक्रमणको यथार्थता’bout जनतालाई सचेत गराउन यस पत्रिकाले महत्वपूर्णए भूमिका निर्वाह गरोस् । नेपाली सीमा भूमिबाट भारतीय सेना हटाउने जनमत तयार गर्न र राष्ट्रियता र स्वाधीनता अर्थतन्त्रको विकास गर्न खुला वातावरण बनाउने कुरा जनतालाई सचेत गराउने भूमिका खेल्न यो पत्रिका सफल होस् । कसैको व्यक्तिगत रुपमा माया, ममता गरेर उसको गलती ढाकछोप गर्ने काम नगनृ आग्रह गर्दछु । राष्ट्र र जनताको विरुद्धमा विदेशी प्रभुको पाउमा पर्ने बकाम कोही नेताहरुबाट भएका् छ भने त्यसलाई नाङ्गेझार पार्ने काममा यस पत्रिकाल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नहिचकिचाओस ्भन्न चाहन्छु ।